Items 1 to 16 of 1152 total
Soung-Proof Diesel Generator 20 KW (ဒီဇယ်အသံငြိမ်မီးစက်)
<p>- လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များအတွက် ပူစရာမလိုဘူးနော်အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံး Sound Proof Diesel Generator တွေရှိပါတယ်။</p><p>- စက်ရုံလုပ်ငန်းသုံး စက်ကြီးများသာမက ရုံးသုံး အလတ်စားများနဲ့ အိမ်သုံးအသေးစား များ ရှိပါတယ်။</p><p>- ဒီဇယ် သုံးဖြစ်တာကြောင့် ရေရှည်ကုန်ကြမှုစရိတ်ကိုအထူးလျော့ချပေး ပါတယ်။</p><p>- အိမ်သုံးလုပ်ငန်းသုံးရရှိနိုင်ပါသည် တစ်ခြားမီးစက်များလိုမဟုတ်ဘဲ အသံကျယ်လောင်မှုကိုလျော့ချထားမှုကြောင့်သုံးစွဲသူများ အကြိုက်တွေ့စေမှာအမှန်ပါတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်မသွားအောင် တာဝန်ယူပါတယ်။</p>
Soung-Proof Diesel Generator 50 KW (ဒီဇယ်အသံငြိမ်မီးစက်)
Soung-Proof Diesel Generator 30 KW (ဒီဇယ်အသံငြိမ်မီးစက်)
Black Tiger Engine
<p>Black Tiger Engine&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>- အသုံးပွုပုံ - စကျတပျလှေ/ ဒိုငျနမို/ ရတေငျပနျ့/ လကျတှနျးထှနျကိုငျး မြားနှငျ့တှဲဖကျအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။</p><p>- ဈေးကှကျအတှငျး Head Nut (4) တိုငျ မညျသညျ့အုပျစု၏ အပိုပစ်စညျးနှငျ့မဆို အသုံးပွုနိုငျသညျ။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- အမြိုးအစား - Black Tiger Diesel Engine</p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>Specifications (BT ZS 1115 GL)<span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>Engine Power - 25HP<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Engine cooling system - No<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Light - Yes<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Fuel Filter ( ဆီဖဈတာ) - No</p><p><br></p><p>Specifications (BT 185P)</p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>Engine Power - 8HP<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Fuel Filter ( ဆီဖဈတာ) - Yes<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Light - No<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Engine cooling system - No<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Specifications (BT ZS 1110NL)</p><p>Engine Power - 25HP<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Engine cooling system - Yes<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Light - Yes<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Fuel Filter ( ဆီဖဈတာ) - No<span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>Specifications (BT 190-1)<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Engine Power - 25HP<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Engine cooling system - No<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Light - Yes<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Fuel Filter ( ဆီဖဈတာ) - No<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>- တောငျပျေါသားရီရှငျး ( စိုကျပြိုးရေး ) ကုမ်ပဏီမှ ဖွနျ့ခြီသော လယျယာသုံးစကျပစ်စညျးမြားနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုမြား၊ စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးသုံး ဆေးဝါးနှငျ့ဆကျစပျပစ်စညျးမြားကို မေးမွနျးခငျြတယျဆိုရငျ ဒီဖုနျးနံပါတျလေးတှကေို ချေါဆိုဆကျသှယျလိုကျနျော ...<span style="white-space:pre">	</span></p>
Yee Shinn Dynamo
<p>- အသုံးပွုပုံ - အိမျသုံး/ စကျရုံသုံး/ လုပျငနျးသုံးမြားအတှကျ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။</p><p>- ကွေးကှိုငျအစဈဖွဈကွောငျးအာမခံသညျ။<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- အမြိုးအစား - Dynamo (ဒိုငျနမို)</p><p><span style="white-space:pre">	</span></p><p>Specifications <span style="white-space:pre">	</span></p><p>Type - AC<span style="white-space:pre">	</span></p><p>Phase - Single <span style="white-space:pre">	</span>Power - 5kW<span style="white-space:pre">	</span>&nbsp; <span style="white-space:pre">	</span></p><p>Voltage - 230V <span style="white-space:pre">	</span></p><p>Ampere - 32.6A</p><p>- တောငျပျေါသားရီရှငျး ( စိုကျပြိုးရေး ) ကုမ်ပဏီမှ ဖွနျ့ခြီသော လယျယာသုံးစကျပစ်စညျးမြားနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုမြား၊ စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးသုံး ဆေးဝါးနှငျ့ဆကျစပျပစ်စညျးမြားကို မေးမွနျးခငျြတယျဆိုရငျ ဒီဖုနျးနံပါတျလေးတှကေို ချေါဆိုဆကျသှယျလိုကျနျော ...<br></p>
<p>အသုံးပွုပုံ - Industrial fans, blowers and pumps, machine tools, household appliances, power tools and disk drives<span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space:pre">	</span>Specifications</p><p>- 230 V<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- 41.5 A<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- 50 Hz<span style="white-space:pre">	</span></p><p>- 1460 rpm<span style="white-space:pre">	</span></p><p>-1.5 HP <span style="white-space:pre">	</span></p><p><span style="white-space: pre;">- တောငျပျေါသားရီရှငျး ( စိုကျပြိုးရေး ) ကုမ်ပဏီမှ ဖွနျ့ခြီသော လယျယာသုံးစကျပစ်စညျးမြားနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုမြား၊ စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးသုံး ဆေးဝါးနှငျ့ဆကျစပျပစ်စညျးမြားကို မေးမွနျးခငျြတယျဆိုရငျ ဒီဖုနျးနံပါတျလေးတှကေို ချေါဆိုဆကျသှယျလိုကျနျော ...</span><br></p>
Industrial Cable Glands Accessories
<p>A cable gland (in the U.S. more often known asacord grip, strain relief, cable connector or fitting) isadevice designed to attach and secure the end of an electrical cable to the equipment. ... Cable glands may be used on all types of electrical power, control, instrumentation, data and telecommunications cables.</p><p>Gland in Myanmar&nbsp;</p><p>လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းများတွင်ထိန်းချုပ်ရာပင်မဌာနဖြစ်သည့် Main DB နှင့် Panel များသို့ ဝါယာကြိုးများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဝင်ထွက်နိုင်ရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန် အတွက် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။&nbsp;</p><p>မီးလောင်ပေါက်ကွဲနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် သာမန်စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းသုံးဟူ၍ ခွဲခြားထားသည့်အတွက်လည်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော လိုအပ်သည့် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။<br></p>
<p>A cable gland (in the U.S. more often known asacord grip, strain relief, cable connector or fitting) isadevice designed to attach and secure the end of an electrical cable to the equipment. ... Cable glands may be used on all types of electrical power, control, instrumentation, data and telecommunications cables.</p><p>လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းများတွင်ထိန်းချုပ်ရာပင်မဌာနဖြစ်သည့် Main DB နှင့် Panel များသို့ ဝါယာကြိုးများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဝင်ထွက်နိုင်ရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန် အတွက် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။&nbsp;</p><p>မီးလောင်ပေါက်ကွဲနိုင်သည့်ပါတ်ဝန်းကျင်များနှင့် သာမန်စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းသုံးဟူ၍ ခွဲခြားထားသည့်အတွက်လည်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော လိုအပ်သည့် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p>